ထဲမှာရွှေအဆင်တန်ဆာများအပြည့်အဝပြောင်လက်လျက်ရှိ၏တောတွင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် ရွှေ Jungle အခမဲ့မရှိသိုက်လောင်းကစားရုံ spins.ဤတွင်တိုင်းသင်္ကေတကိုအိန္ဒိယရှငျဘုရငျတို့၏အသက်အရွယ်အရွယ်အင်ပါယာ၏သငျသညျသတိပေးပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသူတို့ဓားနှင့်တူရွှေအကျယ်ပြန့်ဘဏ္ဍာကိုခဲ့ရတယ်တဲ့လူသိများတဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်, headpieces, မြကွင်း, သေတ္တာများ, နံရံပေါ်၌ရွှေပြောက်စသည်တို့ကို. ယခုပင်လျှင်စိတ်လှုပ်ရှား? သငျသညျဖွစျရမညျ! ဘဏ္ဍာလည်းသင့်ရဲ့လမ်းပေါ်တူအသံ!
ရွှေ Jungle ၏ developer များအကြောင်း
IGT သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဂိမ်းနည်းပညာသေးထပ်အတွက်၎င်း၏စိတျစှမျးအားသက်သေပြခဲ့သည် ရွှေ Jungle အခမဲ့မရှိသိုက်လောင်းကစားရုံ spins. ယခုနှစ် 2006 GTech ကော်ပိုရေးရှင်း၏နာမတော်အောက်တွင်အမေရိကရှိ IGT ရဲ့စစ်ဆင်ရေး၏အစအဦးအမှတ်အသား. ဒီအမေရိကတိုက်-based ကုမ္ပဏီမကြာသေးမီကအတွက်၎င်း၏အမည်ကိုရရှိခဲ့သည် 2015 when Gtech Corporation acquired IGT and took on its name for carrying on all its future operations Industry.
တွင် ရွှေ Jungle အခမဲ့မရှိသိုက်လောင်းကစားရုံ spins, အလောင်းကစား£ 1,500 မှတစ်လှည့်ဖျား 50p အကြားနေကြပါတယ်နှင့်အတူကစားသည်5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း. ရှိပါတယ် 50 ပေါင်းစပ်အနိုင်ရဘို့ရည်ရွယ်ထားမှ paylines. '' ဘဏ္ဍာကို '' ၏သင်္ကေတများရတနာကျောက်တို့ကိုပါဝင်, artefacts, jewellery boxes, နှင့်ဆင်ရုပ်ပွားတော်. ထိပ်ဆုကြေးငွေသင်္ကေတကျားရိုင်းနဲ့ကြဲဖြန့် မှလွဲ. ရှိသမျှတို့ကိုသင်္ကေတများအစားထိုးဖြစ်ပါသည်. ပြင်းထန်သော2ဒါကြောင့်ငါးရက်ကြောင့်မှားယွင်း၏အသီးအသီးပေါ်သောအခါသင်္ကေတမြင့်မားကျားပိုကြီးကိုအနိုင်ပေးမှဦးဆောင်. အဆိုပါအမြင့်ဆုံးဆုလာဘ်မှတက်သည် 40 အဆသင့်ရဲ့ရှယ်ယာ. အားလုံး, သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်ပွဲချင်းပြီးဖြစ်ပါသည်5အရက်ကြောင့်မှားယွင်း၏အသီးအသီးပေါ်ကျား.
ရှိပါတယ်2၏အဓိက features တွေ အခမဲ့မရှိသိုက်လောင်းကစားရုံ spins ဂိမ်း: အဆိုပါ တောရိုင်းနေထိုင်,4ပြဇာတ်အင်္ဂါရပ် စုဆောင်းဖို့သင်လိုအပ်4ရုပ်တုကိုရုပ်ထုသင်္ကေတများ. ဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါ, အရက်ကြောင့်မှားယွင်းတယောက်သော့ခတ်ထားရိုင်းရက်ကြောင့်မှားယွင်းဖြစ်လာ. ဒါဟာအဘို့အလိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ4ပိုပြီးလှည့်ခြင်းများ. အခမဲ့လှည့်ဖျားအပိုဆုအင်္ဂါရပ် အနည်းဆုံးရတဲ့အားဖြင့်အစပျိုးသည် 3-5 ကြဲဖြန့်သင်္ကေတများ. အခမဲ့ခုနှစ်တွင်ဆုကြေးငွေ spins, သင်သော့ခတ်ရိုင်းရက်ကြောင့်မှားယွင်းဖို့ရက်ကြောင့်မှားယွင်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရေအတွက်ပါစေနဲ့ဖွင့်ဖို့လိုအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ၏အရအေတှကျကိုရှေးခယျြဖို့ option ကိုပေးအပ်ထားတယ်.
3 ကြဲဖြန့်: 15 ရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ3သော့ခတ်ထားခံရ
6 ရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ2နှင့်4သော့ခတ်ခံရ
2 ရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ 1,3နှင့်5သော့ခတ်ခံရ
4 ကြဲဖြန့်: 30 ရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ3သော့ခတ်ထားခံရ
12 ရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ2နှင့်4သော့ခတ်ခံရ
4 ရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ 1,3နှင့်5သော့ခတ်ခံရ
5 ကြဲဖြန့်: 75 ရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ3သော့ခတ်ထားခံရ
30 ရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ2နှင့်4သော့ခတ်ခံရ
12 ရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ 1,3နှင့်5သော့ခတ်ခံရ
အလတ်စားကှဲလှဲဂိမ်းမှအနိမ့်ဖြစ်ခြင်း, အ အခမဲ့မရှိသိုက်လောင်းကစားရုံ spins အထူးသဖြင့်ကိုယ့်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံ slot ကနှင့်အတူပတ်ပတ်လည် laze နှင့်လွယ်ကူသောအချိန်ရှိသည်လိုသူစွန့်စားမှု-ဆန္ဒရှိကစားသမားများကပိုမိုနှစ်သက်သည်.
မိုဘိုင်းကစားတဲ့အခမဲ့ဂိမ်း | အကောင်းဆုံးဖုန်းကာစီနို | £ 500 အခမဲ့